Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Toriteny
Te hihavana amintsika Andriamanitra
Vanimpotoanan’ny Karemy isika izao, midika inona ho antsika Kristianina izany?
Rehefa natao batemy Jesoa, dia nisokatra ny lanitra ary nisy feo toy izao avy any an-danitra : “Inty ny zanako malalako izay ankasitrahako indrindra”. Rehefa vita ny batemin’I Jesoa dia nentin’ny Fanahy tany an’Efitra Izy ka nitoetra tany efapolo andro sy efapolo alina. Io no atao hoe KAREMY; izay famintinana ny teny hoe “Efapolo”.
Midika fotoana ampy sy feno hiomanana amina zavatra iray io isa io. Manaporofo izany ny isan’ny andro manomboka ny Alarobian’ny lavenona hatramin’ny Zoma Masina fa miisa 40 andro.
Fa ny isa efapolo ihany koa dia mampatsiahy ny fanandevozana ny zanak’Israely tao Egipta, 40taona izy ireo nivezivezy talohan’ny nahazoany ny tany nampanantenaina.
Tsy izany ihany, fa nandritra ny 40andro sy 40alina I Moizy tany an-tendrombohitra naka ny lalàna.
Santionany ihany ireo fa I Jesoa koa dia nitoetra 40andro sy 40alina tany an’efitra mialohan’ny hitoriany ny Vaovao Mahafaly tamin’ny olona.
Voalazan’I Md Lioka sy Md Matio fa tapitra io fotoana fiomanana io dia nalain’ny demony fanahy Jesoa, fa I Md Marka kosa nilaza fa nandritra io fotoana io dia niady tamin’ny fakampanahy IZY saingy teo foana ny Anjely nanompo Azy. Tsy ny fakampanahy ihany fa voalaza tao amin’ny Evanjely ihany koa fa naira-nitoetra atamin’ny bibidia I Jesoa. Tsar any mampahafantatra amitsika fa ity farany dia tandindona amin’ny fahatongavan’ny Mesia,mbola manamarina hatrany izany fa fotoanan fiomanana io 40andro sy 40alina io.
Fotoanan’ny Karemy izao, fotoana sarobidy omen’Andriamanitra antsika ahafahantsika MIBEBAKA sy MANAPA-KEVITRA satria izay no anto-pisian’ny vanim-potoanan’ny Karemy. Samy mahalala ny kilemany ny tsirairay ary samy mahalala ny tenany, ny hirariana mba samy hiezaka hiala amin’ny fahazaran-dratsy sy ny fitondratena tsy mendrika. Tsy mora ny ady amin’ny fakam-panahy satria na I Jesoa aza niaina an’izany tany an’ Efitra ary mbola misedra izany ankehitriny. Amin’izao mantsy dia isika mihitsy no misintona Azy hampiseho ny fahefany amintsika toy ilay nataon’ny demony taminy tany an’Efitra.
Tamin’ny Alarobian’ny lavenona isika nihosotra lavenona: mariky ny fahavononatsika hibebaka iny fa tsy fietsika ivelany anarahana ny besinimaro fotsiny ihany. Mboala arahina teny aza izany hoe “Hibebaka aho ary hino ny Evanjely”, tsar any manamarika fa io teny ataontsika mandritra ny faiosorana lavenona amin’ny handritsika io dia valy sy fanomezan-toky ho setrin’ilay tenin’I Jesoa hoe “Efaakaiky ny fanjakan’Andriamanitra, mibebaha ary minoa ny Evanjely”.
Mitaky ezaka lehibe avy amintsika noho izany izao vanim-potoan izao dia tsy inona fa ny Fifadian-kanina, ny Vavaka ary ny fahaizana mizara amin’ny hafa.
Mila mifady hanina isika satria manalefaka ny filàn-dratsin’ny nofo izany. Fa mitarika antsika hizara ihany koa ny fifadian-kanina, omena ireo mila izany. Ilaina isika kristianina manana tanjona ary manao onitry ny karemy amin’izay mandray anjara mivantana amin’ny fahafoizana ho an’ny hafa. Fihetsika maro no afaka atao ka manana safidy isika, miankna amin’ny fahafahantsika. Satria tsy voatery ho manana ny ampy vao afaka mizara, entanina aza ianao hanome ny tsara indrindra avy aminao ho an’ireo mahantra sy ory satria voalaza fa tsara kokoa ny manome noho ny mandray.
Manaraka izany, ilaina hamafisina ny fitiavam-bavaka: isaka ny hariva @ 8ora ohatra dia mila miara mivavaka ny mpianakavy, ary alohan’ny hatory entanina ihany koa ny tsirairay hivavaka manokana. Tsy hoampoizintsika ny vokatr’ireo ezaka takian’ny vanim-potoanan’ny Karemy ho antsika ireo ka mangataka ny fahasoavan’Andriamanitra isika ahafahantsika manatanteraka izany. Amen
Alahady 21/06/2015 : Toriteny
Lamesa noely 25/12/2015 : Toriteny
Toriteny Alahady 18 Febroary 2018